. आज महाकबी लक्ष्मी प्रसाद देबकोटाको ११२औं जन्म जयन्ती::Online News
भर्खरै : आज महाकबी लक्ष्मी प्रसाद देबकोटाको ११२औं जन्म जयन्ती
भोजपुर कात्तिक २९
नेपाली साहित्यका महान प्रतिभा महाकबी लक्ष्मी प्रसाद देबकोटाको ११२ औं जन्मजयन्ती आज विभिन्न कार्यक्रम गर्दै मनाइदैछ ।
महाकबी देबकोटाको जन्म वि.स .१९६६ कात्तिक कृष्ण औंसि अर्थात लक्ष्मी पुजाको दिन काठमाडौको डिल्ली बजारमा भएको थियो । दस बर्षको उमेरमा कबिता लेख्न सुरु गरेका देबकोटाका थुप्रै महाकाब्री ,खण्डकाब्य ,निबन्ध ,कथा,कबिता ,नाटक ,कबिता,गित,समलोचना र फुटकर कबिता प्रकाशित छन । उनले नेपाली साहित्यलाई सय भन्दा बढी कृति दिए । यी कृति माध्यम बाट देबकोटाले नेपाललाइ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाए ।
नेपाली साहित्यमा आधुनिक महाकाब्य लेखनको थालनी गरेका देबकोटाको मुनामदन´खण्डकाब्य नेपालि भाषामा प्रकासित हाल सम्म सबै भन्दा बढी बिक्री भएको पुस्तक हो । नेपाली साहित्यमा स्वच्छन्दताबादी -प्रगतिबादी धाराका प्रवर्तक देबकोटाको रचनामा मानबताबाद,प्रकृति प्रेम र क्रान्तिकारी झल्कन्छ ।उनका सिर्जनामा पुर्बिय र पाश्चात्य दर्शनको संयोजक पाइछ । भारतका माहा पण्डित राहुल साङ्कृत्यायनले देबकोटा एक्लै भारतक माहाकबी सुमित्रानन्द पन्त ,जयसंकर प्रसाद र सुर्यकान्त निरालाको सयुक्त रुपसङ तुलना गरेका थिए भन्ने मान्यता छ । नाटकिय सम्राट बालकृष्ण समले देबकोटामुनामदन´शाकुन्तल´महाकाब्यपागल´ कबिता सङै तीन पट्क जन्मेको बताएका थिए ।
बिदेशी भाषामा नेपाली कृतिको अनुबाद र बिदेशमा भएका विभिन्न सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरि नेपालि साहित्यको बिश्वब्यापी प्रचारप्रसारमा समेत उनले महत्त्वपुर्ण योग्दान दिएका थिए । महाकबी देबकोटाले अङ्ग्रेजी साहित्यका फ्रान्सिस बेकन ,चाल्र्स जस्ता १५ गध्य लेखकका निबन्ध को चयन गरि वि.स. १९९७ मा प्रसिद्ध प्रबन्ध सङ्ग्र´ प्रकाशन गरेका थिए । महाकबी देबकोटाले पागल ´ कबितालाइ आफैले अङ्ग्रेजीमा अनुबाद गरे ।उनले पाश्चात्य ग्रीसेली श्रोत बाट अनेकौं गथाको नेपाली करण गरेका छन ।
वि.स .२०२४मा प्रकाशित मायाबिन´सुन्दरी प्रोजर्पिना´जस्ता खण्डकाब्य र `प्रमिथस´महाकाब्य यसका उदाहरण हुन । उनको निधन वि.स २०१६ सालमा भएको हो ।
सौतेनी छोराको हत्या गरि जेल गएकी आमाले जेलमै पाइन बच्चा
भारती नोट र अमेरिकी डलर सहित २ जना पक्राउ